Shiinaha oo laga hirgalinayo adeeg qadka looga dalbanayo waardiye - BBC News Somali
Shiinaha oo laga hirgalinayo adeeg qadka looga dalbanayo waardiye
22 Agoosto 2017
Lahaanshaha sawirka PEAR VIDEO
Image caption Adeegga cusub ee qadka looga dalbanayo waardiyaha
Magaalada Qingdao ee ku taala koonfur galbeed dalka ee Shiinaha waxaa la qorshaynayaa in laga hirgaliyo barnaamij cusub oo dadka u fududaynaya adeeg ay ay ku dalban karaan waardiye ama illaalo hubeysan, adeegaas oo ay taleefoonka ku shubanayaan.
Adeeggan oo lagu magacaabo Jinyiwei ayaa waxa uu u shaqeeyaa sida adeegga tagaasiista lagu dalbado ee Uber loo yaqaano, waxaana heegan ah shaqaale dhan 50,000 dalka oo dhan kuwaasi oo ka hawlgala 47 shirkadood oo qaabilsan arrimaha ammaanka rayidka.
Addeegan ayaa waxa uu qofka ka heli karaa waardiye u gaar ah haddii uu dareemo in naftiisa ay halis ku jirto ama uu cabsanayo.
Wargayska Afka Ingiriiska kusoo baxa ee China Daily ayaa sheegay in qiimaha waardiyaha uu u dhaxeeyo $10 doolar illaa $23 doolar halkii saac, waxaana adeegga loo qabanayaa shaqsi ama shirkad.
Image caption Li Shangshang oo ka mid ah dadka sameeyey barnaamijkan
Ninka lagu magacaabo Li Shangshang oo ka mid ah dadka sameeyey barnaamijkan ayaa wargayskan u sheegey in waardiyeyaasha ay ka midyihiin dad horey ciidamadda oga tirsanaan jirey, waxaana looga baahanyahay in ay keenaan kaarkooda aqoonsiga iyo warqaddii looga fasaxay ciidamadda si loo diiwaangaliyo dadka barnaamijkan ka faa'iideysanaya.
"Dhammaantood waxaa looga baahanyahay in anshaxooda uu wanaagsanyahay, islamarkaasina ay qaataan casharo lagu tababarayo, islamarkaasina ay xirtaan dareeska shaqada" ayuu yiri, isaga oo intaas ku daray in ay la shaqeeyaan booliiska haddii ay rabshad dhacdo ama dagaal.
Dadka isticmaala baraha bulshada ee Shiinaha ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey adeeggan cusub, badankoodna waxa ay ku tilmaameen fikrad wanaagsan oo anfacaysa dadka tabarta daran.
Balse dadka qaarkood ayaa su'aal iska weeydiiyay in adeeggan ay si qaldan oga faa'iideysan doonaan dumarka kaligood nool ee u baahan lammaanaha.
Shirka G20 oo ka furmay Shiinaha